एक समय नेपालका ‘रोना धोनावाला’ फिल्मको पर्यायजस्तै थिइन्, अभिनेत्री निरुता सिंह । फिल्म ‘दक्षिणा’ बाट नेपाली सिनेमामा प्रवेश गरेकी उनले त्यसपछिको एक दशक यस्तै भूमिकामा एकछत्र राज गरिन् । उनले अभिनय गरेका ‘आफ्नो मान्छे’, ‘दर्पण छायाँ’, ‘ठूल्दाइ’ लगायत फिल्म हिट छन् ।फिल्म ‘फर्की आऊ’ पछि भारतको मुम्बई हानिएकी निरुता सात ...
अष्ट्रेलियामा विराट र अनुष्काःईश्वरले सबैको रक्षा गरुन्
2nd Jan,Sydney भारतीय क्रिकेट कप्तान बिराट कोहली र अभिनेत्री तथा उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा केहि दिन दिन सिड्नी रहेका छन् । उनीहरु क्रिकेट संगै नयाँ बर्ष मनाउनका लागि सिडनी आएका हुन् ।अस्ट्रेलियामा जारी क्रिकेटको उत्सव बिग बास संगै यो सेलेब्स कपल्सले सिड्नीमा नयाँ वर्ष मनाए । बिराटले सामाजिक संजाल ईन्ष्टामा नया बर्षकै...
26 Nov, आफ्नै नाम, शान र पहिचान सहित ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डको तेस्रो संस्करण २०१८ हुने भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोलोराडो राज्यको डेनभर शहरमा आगामी जनवरी ५ तारिख २०१९ मा उक्त अवार्ड आयोजना गरिने भएको हो । नेपाली चलचित्रकर्मीहरुलाई सम्मान पुरस्कार र प्रोत्साहन गर्ने हेतुले ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड गर्...
#METOO को असर ! फिल्मका लागि ऐश्वर्याले निर्देशकसँग रात बिताएकी थिइन्
कार्तिक १८ मुम्बइ। बलिउडमा पछिल्लो समय ‘मि टू’ अभियानले यौनजन्य हिंसाका धेरै घटना बाहिरिएका छन् । यससँगै बलिउडमा कास्टिङ काउचको विषयमा पनि धेरै चर्चा भइरहेको छ । कास्टिङ काउचका विषयमा धेरै निर्माता निर्देशक विवादमा तानिएका छन् । केही निर्माता निर्देशकविरुद्ध केस पनि चलिरहेको छ । कास्टिङ काउच अर्थात फिल्ममा काम दिएको ब...
अभिनेत्री सनी लियोनीलाई ज्यान मार्ने धम्की
29 Oct.एजेन्सी । सनी लियोनीलाई भारतभरीबाट ज्यान लिने धम्की आउँन थालेको छ । कर्नाटकबाट शुरु भएको बिरोध अहिले भारतभरी फैलिएको छ । वास्तवमा, सनी दक्षिणको ऐतिहासिक नाटक चलचित्र भिरामादेवीमा मुख्य भूमिका खेल्दै छिन । त्यही भूमिकालाई लिएर कर्नाटकमा रहेका संगठनहरु र देशभरी रहेका त्यसका सदस्यहरुले कडा विरोध गरेका छन । भिरामादे...
एक हुदै दिपिका-रणवीर,क-कस्ले पाए बिहेको निम्तो ?
२७ अक्टोबर,सिड्नी । अहिले बलिउडमा चर्चित अभिनेत्रि दिपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको बिवाहको कुरालाइ लिएर निकै चर्चा चलिरहेको छ । उनीहरुको बिबाहको मिति समेत सार्वजनिक भइसकेको छ ।अभिनेत्रि दिपिका पादुकोण र अभिनेता रणवीर सिंह आगामी नोभेम्बर १४ मा बिबाह गरी पति(पत्नी बन्दैछन् ।यतिबेला यो जोडीको बलिउडमा निकै प्रशँसा गर्दैआइरह...
मेनुकालाई भारतीय निर्णायाकले भने “तिम्रो मुल्याकंन गर्ने हाम्रो औकात छैन”
२२ अक्टोबर नेपाल आइडलमार्फत सबै नेपालीको मन जित्तन सफल भएकी गायिका मेनुका पौडेलको सुमधुर आवाजलाई आज पनि कसैले बिर्सन सकेको छैन । नेपाल आइडलबाट अपेक्षितरुपमा बाहिरीएकी उनले त्यसपछि पनि आफनो सांगेतिक प्रस्तुतीलाई रोकिनन्।सांगेतिक क्षेत्रमा केही गर्ने सोचका साथ लागि परेकी उनी भारतकै चर्चित गायन रियालिटी शो ‘सारेगामापा’...
ईण्डियन आइडलबाट बाहिरिए अनु मलिक
२१ अक्टोबर । बलिउडका चर्चित म्यूजिक कम्पोजर अनु मलिक लाई सेक्सुअल हेरेसमेंट आरोप लागेको छ । सेक्सुअल हेरेसमेंटको आरोप कै कारण सोनी टीभीले उनलाई इंडियन आइडल सीजन दश बाटनै निकालिदिएको छ। बलिउड भास्करले लेखेको समाचार अनुसार उनि बाहिरिए पछि बिशाल धड्लानी अनि नेहा कक्कड़संगै अनुकै लेबलको अर्को ठुलो संगीतकर्मीलाई आइडलमा जजको...
सिड्नीमा ‘ईन्टु मिन्टु’को डिमाण्ड
२१ अक्टोबर । नेपालमा गत महिना प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘ईन्टु मिन्टु लण्डनमा’ दुई साता देखी अष्ट्रेलियामा प्रदर्शनरत छ । अक्टोबर १२ देखि सिड्नीमा सुरु भएको चलचित्रको प्रदर्शन मेल्बर्न र तास्मानिया समेत भईसकेको छ ।चलचित्रको शनिबार सिड्नीमा तेस्रो शो भए संगै चलचित्रको डिमाण्ड बढेको देखिन्छ । अष्ट्रेलियाका लागि बितरक सुनि...